ဧရာဝတီ| September 5, 2012 | Hits:4,021
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment DR. THET LWIN September 5, 2012 - 5:03 pm	တို တို ဘဲ—-နောက် ပြန် မ လှဲ. နို င် ဘူး—–ခက် မယ်–ကြာ မယ်–ရှေ့ ဆက် မယ်–။ နှေး တဲ. အ ခါ နှေး မယ်–မြန် တဲ့ အခါ မြန် မယ်—–ဥ ပ မာ– နီး နီး စပ် စပ် -ထိုင်း–ပုံ စံ နဲ. တူ မယ်–။ စ စ် တပ် ၀င် အုပ် ချု ပ် ရင် လဲ–ခ ဏ ပေါ့ ။ ဒီ မို ကေ၇ စီ စ နစ် က တော့ အ မြဲ ရှ င် နေ မယ်–။ ဈေး ကွ က် ဆက် ရှင် နေ ရင် ရ ပြီ–။ တံ ခါး မ ပိတ် ရင် ရ ပြီ–။ ဒါ ကြောင့်– WE ARE –ON THE HIGH-WAY–လို.-တင် နေ တာ ပါ–။ ( ခိုင် လုံ တဲ့ အ ကြောင်း ရှိ တယ်)–ပြော ပြ ခွင့် မ ရှိ ပါ–။